Meizu 18 wuxuu leeyahay taariikh sii deyn oo wuxuu ka muuqdaa sawirrada | Androidsis
Goor dhow ayaan kugu soo dhawaynaynaa taxanaha xiga ee casriga casriga ah ee Meizu, kaas oo laga bilaabi doono 3-da Maarso ee soo socota waddankiisa Shiinaha. Tan ayaa la samayn doonaa, sida laga filayo, laba moodel, kuwaas oo ah Meizu 18 iyo Meizu 18 Pro.
Shirkaddu waxay soo bandhigtay boodhadh rasmi ah oo ay ka muuqdaan labada aaladood, oo ay la socdaan sawirro qeexan oo muujinaya qaab kasta. Labada xaaladoodba waxaan ka helnaa muuqaallo isku mid ah.
Maxaa laga ogyahay Meizu 18?
Soo saaraha taleefanka ayaa daabacay boor xayeysiis ah oo muujinaya Meizu 18 iyo Meizu 18 Pro. Qalabkan ma arki karno gadaasha dambe ee mobiladaan, laakiin naqshadaha hore iyo shaashadaha qalooca ayay ku faanaan. Markaa, waxaad arki kartaa daloolka kamaradda sawir-qaadaha (selfie camera) oo aan ku oollin geesaha, laakiin xarunta kore ee shaashadaha. Sidaa darteed, way cadahay in shirkaddu aysan dooran doonin labalabeeye sawir qaade.
Tan kale waa taas midkood iyo midka kaleba waxay yeelan doonaan akhristaha sawirka faraha isku dhafan shaashadda hoosteeda. Farqiga u dhexeeya cabirka labadooda sidoo kale waa muuqdaa, Meizu 18 wuu ka yaryahay walaalkiis ka weyn.
Astaamaha qaarkood iyo qeexitaanada farsamo ee soo ifbaxay bilihii la soo dhaafay waxay muujinayaan isticmaalka shaashadaha AMOLED oo leh xal buuxa oo FullHD + ah iyo heerka cusboonaysiinta 120 Hz. Snapdragon 870 Qualcomm, halka ay Snapdragon 888 Waxaa loo hayn doonaa Meizu 18 Pro, taasoo ka dhigaysa kan ugu dambeeya terminaalka ugu horumarsan shirkadda.
Bateriga leh awoodda ugu badan ee ah 4.500 Mah ayaa sidoo kale laga heli karaa tiknoolajiyadda dambe ee degdegga ah ee 40 W. Ugu dambeyntiina, waxaa la sheegay in ay ku imaaneyso afar geesood oo kamaradaha gadaal ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Meizu 18 horeyba wuxuu u lahaa taariikh sii deyn: tani waa taleefoonada leh shaashado qalooca u eg
Sida loo rakibo barnaamijyada Android-ka Wear OS